सरिरमा आउने मुसाले हुन सक्छ क्यान्सर ! BishwaGhatana
मुसाले हुन सक्छ क्यान्सर !
२९ फागुन : मुसा छालामा देखिने एक प्रकारको रोग हो । शरीरमा आउने मुसाले धेरैलाई सताएको पाइन्छ । शरीरको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दै जाने भएकाले पनि यसले धेरैलाई हैरान बनाएको हुन्छ । सामान्यतया शरीरमा देखिने मुसा काला, खैरा, सेता, राता हुने गर्छन् । यसको समयमै उपचार गर्न आवश्यक छ । नत्र क्यान्सर पनि बनाउन सक्छ ।
कतिले घरमै त कतिपयले पार्लरमा गएर मुसा हटाउने गरेको पाइन्छ । यसरी मुसा हटाउनु हानिकारक मानिन्छ । यसलाई हटाउन घरेलु विधि प्रयोग गर्दा जटिल समस्या निम्तिन सक्छ ।
पहिलो समाचारराष्ट्रपति निर्वाचन : हालसम्म पचास प्रतिशत मतदान अर्को समाचारजनकपुर–वीरगञ्ज रेलमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्राथमिकतामा